Barcelona oo barbaro la dhaafi weysay kooxda Cadiz oo ay ku soo dhoweysay garoonkeeda Camp Nou – Gool FM
Barcelona oo barbaro la dhaafi weysay kooxda Cadiz oo ay ku soo dhoweysay garoonkeeda Camp Nou
(Barcelona) 21 Feb 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa barbaro 1-1 la dhaafi weysay naadiga Cadiz oo ay ku soo dhoweysay garoonkeeda Camp Nou, kulan qeyb ka ah horyaalka La Ligaha Spain, kulan labo rigoore la iska dhaliyey.
Naadiga martida loo ahaa ee Barcelona ayaa goolka la horreysay waxaana gool ku laad loo dhigay gool u bedelay Lionel Messi daqiiqaddii 32-aad ee qeybtii hore, ciyaarta ayaana lagu kala nastay 1-0 ay ku gacan sarreysay Barcelona.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta, labada kooxood ayaa sameeyey fursado goolal loo filan karay, iyadoo ugu dambeyntii dhammaadkii ciyaarta ay goolka barbaraha heshay kooxda martida ahayd.
Cadiz ayaa gool ku laad loo dhigay kaddib markii mid ka mid ah xiddigaheeda lagu jillaafay xerada ganaaxa dhexdeeda, waxaana kubadda qaaday Alex Fernandez oo rigooradaas gool u bedelay 89’daqiiqo, kulanka ayaana ku soo dhammaaday barbaro 1-1 oo ay labada kooxood ay ku kala baxeen.
Barcelona ayaa iska sii fadhin doonta kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka La Liga iyadoo leh 46-dhibcood, halka Cadiz ay leedahay 24-dhibcood, iyadoo ku jirta kaalinta 15-aad.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Milan Derby Kooxaha AC Milan iyo Inter Milan ee horyaalka Serie A oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Arsenal iyo Man City ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey... (Gundogan & De Bruyne oo ku wada bilowday)